Noodles & Pasita Kugadzira Fekitori - China Noodles & Pasita Kugadzira Vagadziri, Vatengesi
Yakabikwa Dumpling Production Line
Dumplings, ingave muAsia, America, kana Europe, ine huwandu hwakawanda hwevateveri, ivo vanodiwa nevekudyira pasi rese. Kuzadza kwakapfuma uye kuravira kunonaka. Nekubatsirwa kwemazuva ano otomatiki kugadzirwa, tinogona kuzviponesa kubva kunonetesa kugadzirwa kwemaitiro. Ingobika uye unakirwe nekukasira. Tinogona kupa yakakwana dumpling yekugadzira tambo. Kwemapoka akasiyana evatengi, isu tinopa akasiyana ekugadzirisa mhinduro, ayo anoshanda zvizere kune akasiyana outpu ...
Steam Dumpling Kugadzira Line
Madhiramu ane steamed akasiyana neakajairwa madomasi. Musiyano mukuru urimo muchimiro. Maumbirwo emadhiraidhi ane steamed akafanana nemawoko nzira, ayo anonyatso kuputira iyo yekuisira panzvimbo pe extrusion. Naizvozvo, chimiro chiri nani, uye zvakare zviri nyore kuisa ndiro. Panguva imwecheteyo, inogona zvakare kushandiswa mukutsvaira madomasi sekudikanwa. Mune steamed dumpling yekugadzira tambo, dumpling yekugadzira michina ndiyo inonyanya kukosha chikamu. Yedu dumpling machi ...
Udon Noodles Kugadzira Line
Udon manodles akatanga muTang Dynasty yeChina uye akabudirira muJapan. Zvinoenderana nemitemo yeBazi rezvekurima, Masango uye Kubata hove kweJapan, mashini-akagadzirwa manoodles ane muchinjikwa chikamu chinopfuura 1.7 mm anogona kunzi udon noodles. Iyo machira yakasununguka uye kune akawanda marudzi maererano nenzvimbo yekugadzira uye hunyanzvi hwekugadzira. Pamwe chete neJapan soba noodles uye green tea manoodles, anonzi matatu makuru ma noodles muJapan. Iyo pro ...
Frozen Yakabikwa Noodles Production Line
Mafreeze-akaomeswa manoodles akasiyana nema fresh noodles. Nekuda kwekukura, kutonhora, uye nekukurumidza kutonhora, hupenyu hwesherufu hunowedzerwa uye nguva yekubika ipfupiswa. Hunhu hwechikafu chiripo chinenge chiri pachena.Tine makore anopfuura makumi maviri ezviitiko mukugadzirwa kwepasta michina. MuChina, isu tinopa zvishandiso kumakambani makuru ekugadzira manoodle. Mune dzimwe nyika, isu tinopawo tekinoroji rutsigiro uye yakagadzirirwa masevhisi evatengi vakasiyana, whic ...